Dawlada Ingiriiska Oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Weerarro Argagixiso Oo Ka Dhaca Muqdisho & Hargaysa Iyo Somaliland Oo Ka Jawaab Celisay | Salaan Media
Dawlada Ingiriiska Oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Weerarro Argagixiso Oo Ka Dhaca Muqdisho & Hargaysa Iyo Somaliland Oo Ka Jawaab Celisay
June 24,2013 Hargaysa(SM) – Dawladda Ingiriiska, ayaa soo saartay digniin ay Muwaaddiniintayda ugaga digayso inay u safraan magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa ee dalalka Soomaaliya iyo Somaliland, arrimo la xidhiidha cabsi laga qabi karo weerarro argagixiso oo Kooxaha xag-jirka ahi ka fuliyaan magaalooyinkaas. Wasaaradda arrimaha dibedda ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay mar kale baaq digniin ah u dirtay Muwaadiniinteeda u safraaya Caasimadaha Soomaaliya iyo Somaliland ee Muqdisho iyo Hargeysa. Qoraal lagu soo daabacay Barta Intenet-ka ee ay Wasaaradda arimaha dibedda Britain ku leedahay, ayaa lagu sheegay in dadka reer Ingiriis ay ka gogaadaan inay u safraan gabi ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa.
“Waxaa jirta Khatar weyn oo kooxaha Argagixisada ah ay soo maleegayaan, falalka ay qorshaynayaan Kooxaha argagixisadu waxaa ka mid ah afduub, waxaana ay ka samayn karaan Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Muqdisho iyo Hargeysa (Somaliland).’’ ayaa lagu yidhi qoraalkaas ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibedda ee Ingiriiska shalay.
Waxaana qoraalkaas oo sii socday lagu yidhi; “Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Britain waxay aamminsan tahay in ay Kooxaha argagixisadu qorshaynayaan falal khatar ah oo ka dhan ah dadka Ajaanibta reer Galbeedka ah ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyo Hargeysa, waxay sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Dibedda Britain aamminsan tahay in ay kooxaha argagixisadu qorshaynayaan weerarro ka dhan ah dadka reer Galbeedka ee ku sugan Somaliland.”
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Ingiriiska oo qoraalka ay boggeeda Internet-ka ku daabacday sii wada waxay sheegtay inay kooxaha argagixisadu isticmaali karaan taatiko kasta oo ay ku waxyeellayn karaan Ajaaniibta ku sugan Soomaaliya. “Weerarrada Kooxaha argagixisadu qorshaynayaan waxay leeyihiin qaab kasta iyo tab kasta oo ay khatar ugu geysan karaan dadka reer Galbeedka ah sida iyagoo weerarro ku soo qaadaya goobaha dadku ku badan-yihiin ee buuqa ah, munaasabadaha ama Xafladaha lagu qabto goobaha kala duwan, iyo goobaha ay sida gaarka ah u booqdaan dadka reer Galbeedka ah” ayaa lagu yiri. qoraalkani.
Baaqan digniinta ah ee ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Britain ayaa ah kii labaad iyadoo Bishii February ee sannadkani ay sidan oo kale Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ingiriisku ugu baaqday dadkeeda ku sugan Soomaaliya iyo Somaliland inay iskaga baxaan sababo la xidhiidha Kooxaha arrimaha dhinaca ammaanka iyo cabsi ay ka qabto inay argagixisadu weerarro ka fuliyaan, hase ahaatee, Somaliland wax haba-yaraatee waqtigaas iyo xilliyadii ka dambeeyey ka dhacay oo ammaanka lid ku ah haba-yaraatee lama arag, waanay beenayday digniinta ay Ingiriisku ka bixiyeen Somaliland ee dhinaca ammaanka la xidhiidhay.
Geesta kale, Xukuumadda Somaliland, ayaa sheegtay inay dawladda Ingiriiska wada-shaqayn iyo iskaashi dhinaca ammaanka ah leeyihiin, isla markaana warbixinta ay soo saartay shalay ay xoogga saarayso amni-darro ka jirta Soomaaliya iyo cabsida laga qabi karo inay sii socdaan ama sii xoogaystaan weerarrada ay Argagixisadu ku bartilmaameedsanayso Ajaaniibta ku sugan Muqdisho iyo qaybaha kale ee dalkaas, hase ahaatee aanay saamayn taban ku yeelanaynin Jamhuuriyadda Somaliland.
“Inkasta oo baaqan maanta ka soo baxay dawladda Ingiriisku uu xoogga saarayo amni-darrada ka jirta Soomaaliya, haddana waxaannu mar labaad u caddaynaynaa Ingiriiska iyo caalamkaba inaanay wax amni-darro ahi ka jirin Somaliland. Waxaannu caalamka u caddaynaynaa inkasta oo ay Somaliland ku dhex-taallo Mandaqad halis badan oo ammaan-darro meelo badan ka jirto, haddana Somaliland waa dal xasilloon oo ammaan ah, wer-wer iyo cabsi aannu ka qabno nabadgelyada guud ee Somaliland ma jirto.” sidaa waxa yidhi Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar
Wasiirka oo su’aal kale oo laga weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin baaqii dawladda Ingiriisku horraantii sannadkan ay soo saartay iyo kan hadda waxa uu yidhi; “Annagu kalsooni buuxda ayaannu ku qabnaa amniga dalka haddaannu nahay Xukuumadda, Shacabka, iyo Ciidammada, Somaliland waa dal nabdoon, caalamkana sidaas baannu u sheegaynaa, warbixinta Ingiriiska markii maanta (shalay) la soo saaray waa nala soo ogeysiiyey, markaa wax saamayn ah oo ay Warbixinta dawladda Ingiriisku Somaliland ku leedahay ama ku yeelanaysaa ma jirto. dawladda Ingiriiskana waxaannu si fiican uga wada-shaqaynaa oo iska kaashannaa arrimaha amniga la xidhiidha iyo xogaha jira, markaa waxaannu kalsooni buuxda ka qabnaa inay dawladda Ingiriisku kalsooni buuxda ka qabto nabadgelyada iyo xasilloonida Somaliland ka jirta, waana dawlad wax badani naga dhexeeyaan oo aannu aad isugu dhawnahay.”
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland waxa uu Bulshada Caalamka iyo Ajaanniibta dalka gudihiisa ku sugan ugu baaqay inaanay jirin wer-wer amni-darro oo ka jira Somaliland, isla markaana ay aamminaan nabadgelyada Somaliland ka jirta oo uu ku tilmaamay mid cago adag ku taagan oo dhinacyada laga joogo dawlad iyo shicib-ba, isla markaana aan laga cabsi qabin inay wax khalkhal geliyaa yimaaddaan.